Ny Samsung Galaxy S6 no finday avo lenta tsara indrindra amin'ny MWC 2015? | Androidsis
Ny Samsung Galaxy S6 ve no finday avo lenta tsara indrindra amin'ny MWC 2015?
Alfonso ny voankazo | | MWC, About us, Samsung
Samsung dia nilalao betsaka tamin'ny fampisehoana ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge. Ny fizarana finday an'ny mpanamboatra Koreana tsy mandalo ny fotoanany tsara indrindra izy ary mila mamelombelona ny varotra ianao. Ny fanontaniana dia, Ho azon'izy ireo amin'ny Samsung Galaxy S6 ve izany?
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka aminao momba ny antony inoako aho fa ny Samsung Galaxy S6 no finday tsara indrindra natolotra nandritra ity fanontana ny Mobile World Congress ity.
1 Famolavolana miaraka amin'ny famaranana kalitao
2 Fitaovana avo lenta avo lenta
3 Sehatra manokana madio kokoa
4 Fitaovana isan-karazany araka ny Samsung Galaxy S6
Famolavolana miaraka amin'ny famaranana kalitao
Avy amin'ny Samsung Galaxy S3 dia toa izany Samsung dia lany hevitra. Ireo fantsona vaovao natolotra dia ny clones, ankoatry ny fanapoahana baomba finday antonony miaraka amina endrika mitovy, mahatonga ny fananana ny faritr'i Samsung ambony very ny maha-izy azy manokana.
Na dia ny fiovana amin'ny famolavolana ny Samsung Galaxy S6 aza dia tsy hoe efa tsikaritra loatra, tsy misy olona afaka mandà izany Samsung Galaxy S6 Edge dia terminal hafa sy vaovao.
Ary ny zava-misy fa ny mpanamboatra farany tatatra polycarbonate, Fitaovana mateza sy mahatohitra izay mbola plastika, misafidy ny hampifangaro vata aliminioma sy vatana vita amin'ny vera marokoroko, manome endrika Samsung premium S6 sy S6 Edge be dia be kokoa, satria nangataka nandritra ny taona maro ny mpampiasa maro.
Antenaina fa ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge dia nanana ny endri-javatra tsara indrindra teny an-tsena. Ny processeur Exynos 7420 dia manolotra fahombiazana tena tsara sy ny RAM 3 DDR4 XNUMX GB mampanantena hery saika tsy hitoviana izy ireo.
Ny iray amin'ireo lafin-javatra izay manan-danja indrindra amiko amin'ny telefaona dia ny fakantsary. Ary amin'ity tranga ity dia namboarin'ny Samsung. Tsy hiresaka ny mampiavaka azy ara-teknika aho, noho izany anananao izany ity lahatsoratra ity izay asehoko anao ny tsiambaratelo rehetra de Fakan-tsary Samsung Galaxy S6, noho izany dia mazava fa ny mpamokatra monina ao Seoul dia nahatratra ny marika tamin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny fakantsary misy ny hazany vaovao.
Antsipiriany iray hafa izay tena tiako tokoa ny fanatsarana ny sensor ho an'ny sidina an'ny Samsung Galaxy S6. Miaraka amin'ny S5 dia nahasosotra tokoa ny nanetsika ny rantsan-tànanao mba hamantatra ny dian-tànanao. Soa fa nametraka an'ity olana ity ny mpanamboatra.
Ao amin'io fizarana hitako bibikely roa izay tsy dia tiako loatra: ny tsy fahampian'ny slot micro SD card. Na dia marina aza fa ny maodely tsotra indrindra dia mampiditra 32 GB fitehirizana anatiny, heveriko fa ny fanohanana hanitarana ny fahatsiarovana endrika efa saika voatery.
Ny findaiko dia manana tahiry 32 GB raha tsy misy ny fanitarana ny fahatsiarovana ary, na dia marina aza fa tsy mbola nanana olana an-habakabaka aho, dia mety tsy hahatratra ilay slot ny mpampiasa hafa. Soa ihany Sandisk dia manolotra vahaolana amin'ity lafiny ity.
Ary ny lesoka hafa dia ilay bateria tsy azo esorina. Tiako ny afaka manova ny bateria raha misy olako, ankoatry ny zava-misy raha mijanona ny terminal dia azonao atao ny manala ny bateria hamerenana azy io.
Fa amin'ny farany, mbola mieritreritra aho fa amin'ny resaka fitaovana Samsung dia nanao zavatra tsara. Omeko 8 amin'ny 10 izy.
Sehatra manokana madio kokoa
TouchWiz dia nohavaozina. Farany. Mpampiasa maro no nitaraina nandritra ny taona maro momba ny olan'ny lagy ateraky ny fifandraisan'ny mpanamboatra. Ankehitriny Samsung dia nanatsara ny zava-bitan'ny TouchWiz, ankoatry ny fanolorana rindram-baiko roa ho an'ny tompony fotsiny.
Hetsika lehibe nataon'i Samsung mankany avelao ny mpampiasa hisafidy izay rindranasa tiany hapetraka amin'ny findainao, tsy manelingelina ny fitadidianao amin'ny fampiharana an-jatony izay tsy hampiasainay mihitsy.
Fitaovana isan-karazany araka ny Samsung Galaxy S6
Samsung dia manolotra matetika a karazana kojakoja maro karazana ho an'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana Galaxy S. Ary miaraka amin'ny Samsung Galaxy S6 dia tsy hisy fahasamihafana hafa izany. Amin'izany fomba izany, ny mpanamboatra dia nanolotra fonon-tànana tsara izay tsy mihoatra ny filan'ny mpampiasa rehetra.
Ho ahy, ny Samsung Galaxy S6 no terminal tsara indrindra natolotra tao amin'ny MWC 2015. Ankoatr'izay, ny tena mpifaninana amin'ity foara ity, ny HTC One M9, dia mitentina 750 euro, raha ny Samsung Galaxy S6 mijanona amin'ny 699 euro, anton-javatra tokony horaisina.
Tsy te hiresaka momba an'ity lahatsoratra ity aho ato amin'ity lahatsoratra ity politika momba ny vidin'ny mpamokatra lehibe, Noho izany dia manomana lahatsoratra iray hafa aho hiresahako aminao ny fahitako ny tsena, indrindra taorian'ny fahatsapana tsara nandao ahy ny marika Huawei Honor.amin'ny sora-baventy lehibe izay mitentina eo anelanelan'ny 299 sy 350 euro, noho izany, mampitaha azy amin'ny HTC One M9, heveriko fa el Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge no mpandresy mazava tamin'ity fanontana ny MWC ity.
Inona ny hevitrao? Mihevitra ve ianao fa ny Samsung Galaxy S6 no terminal farany tsara indrindra, na izany HTC One M9 dia tena mendrika ny toerana voalohany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Samsung Galaxy S6 ve no finday avo lenta tsara indrindra amin'ny MWC 2015?
Dani464 dia hoy izy:
mety ho tsy ampy intsony
Valiny tamin'i Dani464
Tonga ianao ary ireo teboka ratsy lazainao ahy fa manana izany dia ireo hitako. Ary hanampy ny fahatsiarovana kely aza aho. Fa ny teboka ratsy indrindra dia ny micro SD, na inona na inona zavatra hafa tsy tara, dia io no lehibe indrindra.
Tsy fantatro ny iray amin'ireo namako miasa Samsung mandeha tsara, izany hoe, araka ny nokendren'Andriamanitra. Mihitsoka izy ireo ary miserana be, indrindra ny S3 sy S4… ..
manamarina dia hoy izy:
Mazava ho azy fa finday avo lenta ny Galaxy S6.
Nilaza mihitsy aza aho fa ny tsara indrindra hatramin'izao, fa amin'ny maha mpanaraka mahatoky ny Galaxy saga, mieritreritra aho fa tokony nanohy ny zavatra nataon'izy ireo ho an'ny Galaxy S5 izy ireo ary nitatra, tena ... tsy azoko hoe ahoana ny tranga raikitra, izay tsy afaka manala azy ireo ihany koa fa tsy mbola misy fanamarinana farafahakeliny IP68 na mihoatra, tokony ho mora kokoa noho ny amin'ny tranga azo esorina toa ny S5 izy ireo ary mbola nitantana izany.
Na dia ekeko aza fa ny fahatsiarovana ny S6 no tsara indrindra eny an-tsena, ny haingana indrindra ary azontsika atao ny mividy terminal hatramin'ny 128GB, na dia hoe raha ... mamaha tsara ny sidina aza aho dia manadino foana ny MicroSD karatra, heveriko fa ny Samsung dia tokony nitahiry azy ireo farafaharatsiny mandra-pahazatra anay tsy nampiasa azy ireo, raha jerena ny 32Gb an'ny MicroSd dia manodidina ny 20-30 Euros fotsiny no vidiny.
Valio ny Exencia
Mandrosoa alohan'ny fampandrenesana Android 5.1 miaraka amin'ny modely Heads Up Hide
Xiaomi dia manomboka miantsona any Eropa